mercredi, 13 octobre 2021 19:47
Pilo kely : Fa dia naninona loatra re ry Ministeran'ny fanabeazam-pirenena no nivarolavo nanao compte fako e
Terena ireo mpiasa eo anivon'ny serasera ministeran'ny fanabeazam-pirenena hamorona compte fako eo amin'ny facebook, hiarovana sy hamaliana izay fanehoan-kevitra mety anohitohina ny ministera na ny MEN. Entina koa anatsarana endrika andramatoa minisitra sy ny filoham-pirenena.
Nisy renfort mihitsy anampiana ireo mpiasa efa miasa ao, ka mahatratra 45 ireo mpiasa asaina hisahana ny serasera.
Mianto-tena na ny fitaovana na ny crédit, araha-maso, ary angonina anaty fichier ny anarana sy ny compte fako noforonina, ary misy ny fanaraha-maso iza no manao iza no tsy manao.
Voarahona voaroaka, na alefa affectation, ireo mpiasa tsy manaraka ny toro-marika.
Misy moa ny groupe secret hivondronan'ireo mpiasa mpanao com hilazana ny zavatra atao isan'andro.
Dia entina aiza re ity fanabeazana ny tanora Malagasy ity e, raha ianareo hianteherana indray no anary ny fanabeazana any anaty fako.
mercredi, 13 octobre 2021 19:40
Fanondranana jirofo : Faharoa eran-tany aorian’i Indonezia i Madagasikara
Atomotra ny fotoana hanondranana jirofo. Nampahafantatra ny ministeran’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana fa ho entitra ny amin’ny fanarahana ny lalàna, koa tsy maintsy manaja ny fepetra rehetra ireo mangataka alalana hanondrana any ivelany.
Ao anatin'ireo fepetra lehibe amin’ny fahazoan-dalàna ny famerenana eto Madagasikara ny vola vahiny sy ny maha ara-dalàna ny orinasa mpanondrana manoloana ny sampan-draharahan’ny hetra.
12 000t ka hatramin’ny 15 000t ny jirofo vokarin’i Madagasikara isan-taona. Faharoa eran-tany isika amin’ny fanondranana jirofo, manarakaraka an’i Indonezia, izay mamokatra hatramin’ny avo fito heny hoharina amin’i Madagasikara.
mercredi, 13 octobre 2021 12:39
Ilakaka : Banky iray voaroba 925 tapitrisa Ariary
Norobain’ny jiolahy ny banky iray ao Ilakaka, Distrika Ihosy Faritra Ihorombe. Ny alin’ny alatsinainy 11 oktobra 2021 no nitrangany. 925 tapitrisa Ariary no lasan’ireo jiolahy.
Nandeha avy hatrany ny sakana tamin’ny lalam-pirenena taorian’ny fanairana azon’ny mpitandro ny filaminana.
Nampiasa fiara tsy mataho-dalana roa ireo jiolahy, namerezan-dia ny mpitandro filaminana. Nampiasa ny fahaiza-manaony maha matihanina azy anefa ireto farany ka tra-tehakin’ny FIP Toliara ny alin’ny alatsinainy 11 oktobra 2021, tao anaty fiara tsy mataho-dalana iray ny jiolahy efatra raha hitodi-doha ho any Toliara izy ireo.
Tratra tao ny volabe sy taratasim-bola maromaro ary basy poleta iray nentin’izy ireo.
Anatin’ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao, ahitana ny marina amin’ity raharaha ity.
mercredi, 13 octobre 2021 09:01
13 octobre : Journée internationale de prévention des catastrophes
13 octobre : Journée internationale de prévention des catastrophes.